खोटाङ राजापानीका दिनेश सुनार गिनिज बुकमा… – Bihani Khabar
Home / News / खोटाङ राजापानीका दिनेश सुनार गिनिज बुकमा…
खोटाङ राजापानीका दिनेश सुनार गिनिज बुकमा…
नेपालको पुर्बी पहाडी जिल्ला खोटाङको हलेशी तुवाचुङ नगरपालिका ११ राजापानी (साबिकको राजापानी गाबिस) का दिनेश सुनारले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने भएका छन । सानै उमेर देखि गाउँका विभिन्न कार्यक्रम हरुमा अति कुशलता पुर्बक ज्योमेष्टिक हान्ने उल्टिने आग्लो स्थान हरुबाट उफ्रिएर आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने गर्दथे । एस्तै क्रममा एकदिन उन्को त्यो कलामा तत्कालीन ससस्त्र प्रहरी प्रमुख सनत बस्नेतको आँखा पुग्यो र उन्को यो गिनिज बूकमा नाम लेखाउने सपना पुरा हुने भयो र उन्को कलाले पनि जिबन्त पायो ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएका दिनेशले कहिले पनि सोचेका थिएनन कि उन्को जिबनमा एस्तो अबसर पनि प्राप्त होला भनेर तर उन्को जिबनमा भगवान बनेर आएका ससस्त्र प्रमुख बस्नेतले उन्को प्रतिभालाई पहिचान गरे र उन्लाई आफ्नो साथमा लिएर एपीएफ को प्रधान कार्यलय हलचोक ल्याए । त्यस पश्चात दिनेस एपीएफ मा भर्ना भए ।
एपिएफ को तालिम संगै उन्को ‘पार्कर’ अरु निखारता आयो । उन्ले सजिलै संग आफ्नो तालिम सकाए । अहिले उनी नेपाल एपिएफमा एक सफल पार्कर खेलाडी को रुपमा प्रसिद्ध छन । नेपालमा येस्तो पार्कर खेलाडी कम भेटिन्छ्न तिनै कम मध्यका दिनेश एक अब्बल पार्कर मा पर्दछन ।
पार्करकै लागि तालिम नलिएको भए पनि उन्को दैनिक अभ्यास एपीएफको दैनिक तालिमले एक अभ्यस्त पार्कर भन्दा कम छैनन । उनी भन्छ्न ” मैले प्रशिक्षणत लिएको छैन तर आफू भन्दा सिनियर डिएसपी साहाब प्रेम श्रेष्ठ सरको हौसला प्रेरणा मेरा लागि प्रशिक्षण भन्दा कमि छैन । हाम्रो संगठनका साथी हरु र संगठनले मलाई ठुलो सहयोग गरेको छ उहाँ हरुको नै बल बुतामा उहाँहरुकै प्रोत्साहनले म आज एस स्थानमा छु ।अब गिनिज बुकमा नाम लेखाउन पनि एपीएफ संगठनले ठुलो सहयोग गरेको छ सहयोगको भुमिका खेलिरहेको छ ।”
मस्ट ट्विस्टिङ व्याक फिलिप्स अफ द वाल इन वन मिनट’ टाइटलमा उनले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड दर्ता गराउन लागेका हुन् । यो विषयमा अहिलेसम्म गिनिजबुकमा कसैले पनि नाम दर्ता गराएका छैनन् । गराएको खण्डमा गिनिजबुकका लागि, नेपालका लागि र सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछन् ।
” गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड दर्ता गराउनका लागि न्युनतम १५ पटकसम्म गर्नुपर्ने गिनिजबुकमा उल्लेख छ, मैले १८ पटकसम्म गरेको छु ।” दिनेश आशावादी हुँदै भन्छन्, ” यति गरे मेरो देशको नामलाई विश्वमा चिनाउने एउटा आधार बन्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि छ ।”
हवल्दार सुन्तली, हँसिया, किस्मत २ जस्ता फिल्ममा उनले स्टन्ट म्यानको भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । उनको यहि कलाका कारणले फिल्मनगरीमा पनि उनको माग बढ्दो छ । दिनेश भन्छन ” कसैले नगरेको होइन, गर्न नसकेको कामलाई देखाउन चहान्छु । त्यसकारण म गिनिज बुकमा नाम दर्ता गर्ने प्रयासमा लागेको हो यहि प्रयास अहिले पनि जारी छ ।”
पार्कर शरिरलाई जोखिममा राखेर गरिने काम हो । दुर्घटना भए जीवन नै खतरामा पर्ने हुन्छ ।उनि भन्छन, आत्मविश्वास बलियो बनाएर यो यात्रामा अघि बढेको छु ।’ उनको सहयात्रामा श्रीमति शर्मिला सुनारले कहिले रोकिनन बरु अघि बढ्ने हौसला दिइन् । बहिनी अस्मिता, काका सुवास, भाई सुनेसले दाईको यो जोखिमपूर्ण कामलाई विश्वमाझ लैजानका लागि हौसाए ।
निर्माता भानु प्रताप, द्वन्द्व निर्देशक अटल निरोज, रोशन भट्टराई, रेवनविक्रम थापा, रोहित थापा, उत्तम विष्ट, राजु लामा, श्री श्रेष्ठजस्ता फाइटरहरूको सँधै नैतिक र आर्थिक समर्थन रह्यो । ‘उहाँहरूको साथ नै मेरो अघि बढ्नसक्ने, बाहिरि दुनियाँमा भिँड्नसक्ने र क्षमता सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्यो ।’, दिनेश थप्छन्,‘संगठनमा रहनुभएका सरहरू एसपी लक्ष्मण सिंह, डिएसपी प्रेम श्रेष्ठ, इनिस्पेक्टरहरू विजय केसी, पंकज चन्द, सुशिल अधिकारी र सई फडिन्द्र ओझालगायतले मलाई एउटा जवानमात्र नभएर क्षमतावान सैनिकका रूपमा वृत्ति विकासमा सहयोग गर्नुभयो ।’
दिनेश हर्षित हुँदै भन्छ्न : ” जीवनमा यतिधेरै सहयोग सायदै कमले पाएका हुन्छन् । यो यात्रामा नेपालका पार्कर कोच क्यानेडेली क्रिश्चियन माकी विशेष हुनुहुन्छ । राहदानीदेखि अनेक काममा उहाँको सहयोग छ । बास्केटबलमा वर्ड रेकर्ड गराइ सक्नु भएको थानेश्वर गुरागाईको गिनिज बुकमा नाम लेखाउन दिएको उत्प्रेरणाले मलाई अरु थप मद्दत गरेको छ ।”
दिनेशको क्षमतलाई धेरैले माया गरेका छन् । उनको कमजोर पारिवारिक आर्थिक अवस्था अब उनको यात्राका लागि बाधक बनेको छैन । उनी क्यालिभर जुत्ता कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेस्डर पनि बनिसकेका छन् । ‘अहिले क्यालिभर सुजको सहयोग पनि रहेको छ, प्रसन्न गौतम सरको यो सहयोग पार्करहरूको भविष्यका लागि पनि बलियो देखेको छु ।’ दिनेश भन्छन ।
www.24nepal.comबाट साभार गरिएको
Previous ‘भ्रटाचारीले बाटो फेरे, घुस लेनदेन भारतीय सहरमा’
Next किन हराउँछन् महिला र बालबालिका ?
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई सहयोग गरेको आरोपमा सिलिगुडी प्रहरीले आमाको उपचारमा गएका इलामका उदय फागोलाइ पक्राउ गरेको छ
पत्रकार उपचार कोषलाई रु ५१ हजार
तपाइको राशिफल आज / वि.सं. २०७४ मंसिर १९ गते मङ्गलबार